12 Ipfupi TED Hurukuro Dzichachinja Hupenyu Hwako Nokusingaperi - Blog
Dzimwe nguva zviri nyore kudzidza kuburikidza neshoko rakadhindwa dzimwe nguva kuoneswa uye pachako kutaurwa kwenyaya kunonyanya kushanda. Panyaya yehurukuro dzeTED, idzi mhedzisiro ipfupi, yakajeka haina kungobatwa nyore, asi zvinokurudzira zvine mutsindo zvekuchinja.
ndinomuda here kana neni ndakasurukirwa
Ikozvino kune hurukuro pane ingangoita tema tema yaunogona kufungidzira, uye seyakaomarara sezvazvinogona kurira, zvimwe zviri nani zviri nani kupfuura vamwe. Kuti tikuchengetedze nguva nesimba kuyedza kufumura aya akanakisa ekukurudzira mavhidhiyo, takuitira basa rakaomarara kwauri.
Pazasi isu tinobatanidza kune gumi nemaviri hurukuro dzeTED dzinova kirimu yechirimwa kana zvasvika kune zvine simba, zvinobata, uye kupfuura zvese, mharidzo dzinoshandura hupenyu. Unogona kutarisa (kana kutoteerera) kune izvi chero nguva uye isu tinokurudzira kuti usaedze kuzvidya zvese kamwechete. Panzvimbo iyoyo, makaaka iwo (kana zvirinani izvozvi, bhukumaka iri peji) uye tora iwo rimwe panguva. Mushure meimwe neimwe, pedza nguva pfupi uchifunga nezve zvirimo uye kuti zvinoshanda sei kwauri neupenyu hwako.
Dan Gilbert: Iyo Inoshamisa Sayenzi YeMufaro
Kureba: 21 maminetsi
Chii chinoitika kana tikasawana zvatinoda? Tinowira mukuora mwoyo uye kusagutsikana here? Zvakanaka… kwete, kwete chaizvo. Nyanzvi yezvepfungwa yeHarvard Dan Gilbert anotiratidza - nerubatsiro rwezvinonakidza zviedzo - kuti pfungwa dzedu dzine 'immune system immune' inoshanda kuchengetedza hunhu hwedu (ish) hunhu zvisinei nezvatinga fungidzira zvakanaka kana zvakaipa.
Alain de Botton: A Kinder, Nyowani Philosophy Yekubudirira
Nhaurwa: Kubudirira / Kukundikana
Kureba: 17 maminetsi
Unotsanangudza sei budiriro uye kutadza? Tsanangudzo idzi ndedzako here? Yakawanda sei magariro uye tsika masimba ari kuumba tarisiro yatinayo yehupenyu hwedu uye ichikonzera kuti isu tigare munzvimbo yekugara tichizvidya mwoyo? Munyori uye muzivi wazvino Alain de Botton anoongorora.
Scott Geller: Iyo Psychology Yekuzvikurudzira-Yako
Kureba: 16 maminetsi
Tinozvikurudzira sei kuti tishande nekushandira zvinangwa zvedu? Tingabatsira sei kukurudzira vamwe kuita zvakafanana? Muzvinafundo Scott Geller weVirginia Tech anotyora kukurudzira kuita '4 Cs' ayo, kana asanganiswa, haakwanise kutadza kutitungamira kuenda kumberi kuzviroto nezvido zvedu.
Matthieu Ricard: Tsika Dzemufaro
Mufaro, tsitsi, mutsa une rudo, uye zvimwe zvakanaka pfungwa zvinokudziridzwa kuburikidza nekuita uye tsika? Buddhist monk uye munyori Matthieu Ricard vanoti kuzvipira kunguva yakashandiswa kutarisa mukati kwakaringana kushandura mashandiro anoita uropi hwedu uye nekushandura zviitiko zvedu kune chimwe chinhu chine rugare nekugutsikana.
Carol Dweck: Simba Rekutenda Kuti Unogona Kuvandudza
Nhaurwa: Kukura Kwemunhu
Kureba: maminetsi gumi
Iko kugona kwedu kufunga, kugadzirisa matambudziko uye kukunda zvipingamupinyi zvakagadziriswa kana zvinogona kukudziridzwa kuburikidza nemeseji akakodzera uye maitiro? Anokurudzira anotsvaga Carol Dweck anoisa pamberi nyaya yeiyo 'isati' nzira yekuzvitenda iyo inopa mukana wekukura uye kugadzirisa. Anoita nyaya yacho kunyanya kuvana uye nesarudzo dzehupenyu hwavo, asi zvakafanana zvinogona kushandiswa kune wese munhu, zvisinei nezera ravo.
Guy Winch: Nei Tese Tichifanira Kudzidzira Emotional Rubatsiro rwekutanga
Nhaurwa: Hutano hwepfungwa & Kusimba
Tese tinonyatsoziva kuti isu tinofanirwa kunge tichichengeta miviri yedu, tichiita hutsanana, uye nekupa rubatsiro rwekutanga kana takuvadzwa. Asi vazhinji vedu tinokundikana kutora nzira imwecheteyo yekungwarira kupfungwa dzedu. Nyanzvi yezvepfungwa uye munyori Guy Winch anotikurudzira kuti titarise zvakanyanya kumanzwiro edu uye hutano hwepfungwa kuitira kuti tigone kugadzikana uye tigare tichifara, tichigutsikana, uye tisina kunetseka hupenyu.
Zvinhu zvisere Vanhu Vakawanda Vanotora Hupenyu Hwose Kuti Vadzidze
Zvinhu gumi neshanu Iwe Zvausingafanire Kumhanyisa Muhupenyu
9 Kuzvivandudza-wega Mabhuku Akachinja Hupenyu Hwangu
Caroline McHugh: Unyanzvi hwekuve Iwe Pachezvako
Nhaurwa: Kuve Wako / Wechokwadi
Kureba: 26 maminetsi
ndinoda rudo rwakawanda kubva kumukomana wangu
Uri kurarama seyako chaiye here kana kuti uri kugara uchivanza yako chaiyo pfungwa uye manzwiro kuyedza kuwana kufarirwa nevamwe ? Kana tsoka dzako dzakanamatira zvakasimba mukamba yekupedzisira, ungaendesa sei hupenyu hwako kune iyo kwaunonzwa wakasununguka uye uchikwanisa kutaura chokwadi chako? Munyori Caroline McHugh anoda kukuratidza kuti hupenyu hwako ishoko rako kune nyika, saka zvinogona kunge zviri izvo zvaunotenda mazviri.
Kathryn Schulz: PaKutadza
Kureba: 18 maminetsi
Zvinoita sei kana iwe ukawana chakashata? Pfungwa dzako dzinoedza kukuchengetedza sei kubva pakunzwa uku? Tinofanira here isu tese kuziva zviri nani nekukanganisa uye kubvuma kuti zvatinotenda hazvisi zvakanaka kuratidzira kwekunze kwenyika? Izvi zvinogona sei kuvandudza hukama hwedu nemumwe nemumwe uye nharaunda yedu mune zvese? Munyori Kathryn Schulz anopindura iyi mibvunzo uye nezvimwe mune izvi kufunga-pfungwa TED hurukuro.
Gen Kelsang Nyema: Rufaro Ndirwo Ruri Mupfungwa Dzako
Zvinotaridza kuti chimiro chedu chemukati chakabatana zvisingaite nenyika yepanze, asi ichokwadi here ichi? Buddhist Buddhist Gen Kelsang Nyema anotsanangura kuti ichi chinongedzo chinongove chisipo kunze kwekunge isu tichichibvumira icho kuti chiripo. Kana tikasarudza kudaro, tinogona kurima rugare rwepfungwa uye mufaro zvisinei nezviitiko zvekunze kana zvinokurudzira. Inzwi rake rinonyaradza uye kudziya kwaanoburitsa kunoita kuti iyi ive hurukuro inozorodza zvakanyanya, asi ine simba.
Nigel Marsh: Maitiro Ekuita Basa-Hupenyu Balance Basa
Zvinorevei chaizvo kuva nehutano hwakanaka hwehupenyu-hwehupenyu? Zvakanaka, hazvisi zvekuchinja-nguva kana hofisi kuchengetwa kwevana izvo vamwe vashandirwi vanofunga kuti ndizvo. Kune zvimwe zvakawanda kwazviri, asi zvinopesana zvishoma zvakare - sezvo iwe uchauya kuzoona mune ino inobata hurukuro yeTED iyo izere nekuseka uye zvidzidzo zvakakosha.
kana murume akushevedza
Angela Lee Duckworth: Grit: Simba Rekushushikana Uye Kutsungirira
Kureba: 6 maminetsi
Chii chakafananidzwa nevanhu vese vakabudirira? Chii chiri nezve ivo nemaitiro avo kumatambudziko ehupenyu anovatendera kuti vabudirire panotadza vamwe? Mhinduro yacho yakapusa uye inopa chidzidzo chakakosha kwazvo cheupenyu isu tese chatingashandisa nzira yekumutsiridza pairi. Nyanzvi yezvepfungwa uye aimbova mudzidzisi anotsanangura kuti nei grit iri chinhu chakakosha pakubudirira pane chero chinhu chaunoisa moyo wako.
Daniel Kahneman: Chirahwe cheZviitiko Vs. Ndangariro
Kureba: maminetsi makumi maviri
Maonero edu ehupenyu hwedu hachisi chinhu chakananga zvachose. Muchokwadi, kana iwe ukaedza kuona kuti munhu anofara zvakadii, iwe unofanirwa kufunga maviri akasiyana kwazvo, uye kazhinji akasiyana zvakanyanya, zvikamu: kwavo kusangana kwavo uye nekurangarira kwavo pachavo. Idzi zvikamu zviviri zvemunhu mumwe chete zvinokwanisa dzimwe nguva kupa zvinopesana mhinduro kumubvunzo: unofara sei? Mubayiro weNobel uye muvambi wehunhu hwehupfumi, Daniel Kahneman anotsanangura zvakawanda.
Handina chero zvekuvaraidza kana zvido
alice musondland makotesheni isu tese tinopenga pano
ndine hurombo kunzwa nezve ako ekurasikirwa makotesheni
mibvunzo yekubvunza yakakosha imwe
shoko rekushaya munhu zvakanyanya rinorwadza
kuita shanduko pasirese